» म सपना र विपनामा केपी ओलीलाई नै देख्छु तर माधव नेपालका पक्षमा उभिन्छु
९ चैत्र २०७७, सोमबार ०९:४९
तर माधव नेपालका पक्षमा उभिन्छु
राधाकृष्ण मैनाली, पुराना वामपन्थी नेता हुन् । उनी लामो समयदेखि सक्रिय राजनीतिबाट ओझेलमा छन् ।
हालै मात्र उनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को झलनाथ खनाल–माधव नेपाल समूहले आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलामा अतिथिका रुपमा देखा परे ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमाले विवाद उत्कर्षमा छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेता माधव नेपाल दुई खेमामा विभाजित छ ।
यहि चैत ४–५ गते ललितपुरस्थित हेरिटेज गार्डेनमा आयोजित भेलामा उनी सहभागी बने ।
उनीसहितका पुराना वामपन्थी नेताहरुको उपस्थितिले चर्चा पनि पायो । राष्ट्रिय भेलामा सहभागी हुनुको उद्देश्य र पछिल्लो अवस्थाका विषयमा हामीले मैनालीसँग केही जिज्ञासा राख्यौं ।
पछिल्लो समय पार्टीका मञ्चहरुमा देखिनुहुन्नथ्यो । अलि ओझेलमा हुनुहुन्थ्यो । एकाएक देखिनुको कारण के हो ?
पहिलो कुरा त माधवजीले बोलाउनुभयो । अर्को कुरा धेरै उत्पीडनमा पर्नुभयो । मसँग संगठित भएको एमाले हो । अहिले ओलीजीको नेतृत्वमा एमाले पुगिसकेपछि माधव, झलनाथजीलगायतको अहिलेको कार्यकर्ता भेलामा उपस्थित भएको संख्या साँच्चिकै उत्प्रेरणा बढेको छ । ओलीजीले अनाहकमा संसद् भंग गर्नुभयो । संसद फर्केर आयो त्यसको कुनै रेस्पोन्स गर्नुभएको छैन ।
त्यतिमात्र नभएर पछिल्लोपटक एमालेको विधानविपरीत गएर सम्पूर्ण केन्द्रीय कमिटीले पनि नपाउने अधिकार प्रयोग गर्दै फागुन २८ गतेको बैठकमा सबै पदाधिकारीहरुलाई खत्तम गर्नुभो, विघटन गरेर आफू मात्रै बाँच्ने । महासचिव मात्रै बाँच्ने निर्णय गर्नुभो । केन्द्रीय कमिटी बैठक विधिवत बोलाएर पदाधिकारीहरु राखेर गरेको भए पनि एउटा कुरा हुन्थ्यो ।
उहाँहरु पिडनमा पर्नुभो । चुपो लागेर, शिर निहुर्‍याएर जाने कि शिर ठाडो पारेर त्यसको विरोध गर्ने दुईवटा बिन्दुको बीचमा उहाँहरु फर्किएपछि उहाँहरुले सोच्नुभयो ।
अब शिर निहुर्‍याएर जाने होइन । ठाडो शिर पारेर विधानको पक्षमा उभिने निर्णय गर्नुभो । त्यो मलाई उचित नै लाग्यो ।
किनभने कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मान्छेले शिर निहुर्‍याएर हिँडेर काम छैन । पहिलो कुरा स्वाभिमानलाई खडा गर्ने, दोस्रो कुरा त्यो स्वाभिमानसँग जनताको हितलाई जोड्ने । यी दुई कुरा भएमात्रै राजनीति हुन्छ । जनताको हित पनि नजोड्ने र स्वाभिमान पनि छाडेर कार्यकर्ता होइन दास मनोवृत्तिमा गयो भने त त्यो राजनीति कार्यकर्ताको ओझ पनि हुँदैन । त्यसले देश विकास पनि गर्दैन ।
इतिहास यस्तो पनि थियो । कुनै बेला माधव नेपालले कारवाही पनि गर्नुभएको थियो । आज फेरि इतिहासले माधवकै कित्तामा पुर्‍याइदियो ?
हो कारवाही गरिएको हो । म अहिले आउनेबित्तिकै माधव कित्तामा गएको पनि नभिनहालौँ ।
यही दलको कार्यकर्ता भइहालेँ पनि कुरा पनि होइन । म अतिथिको रुपमा आएको हो । म कुनै कार्यकर्ता वा नेता भएर यहाँ आएको होइन । भोलि स्थितिले त्यही ठाउँमा पुर्‍याउँदैन भन्न पनि सकिँदैन । अहिले त्यस्तो स्थिति होइन ।
फेरि पोलिटिक्समा एकचोटी भएको दुष्मनि जिन्दगीभर दुष्मनि हुन्छ भन्ने पनि होइन । ओलीजीसँगको मित्रता जेलको कठिन दिनमा घाँटीको मित्रता थियो । अहिले त्यो त रहेन । मलाई के लाग्छ भने माधवजीले कारवाही गर्दा भित्रिरुपमा चुक्ली हालेर गर्नुपर्छ भनेर पम्प दिने त ओलीजी नै हो । मलाई लाग्छ, ओलीजीको भरथेग नभएको भए माधवजीले मात्रै मलाई कारवाही गर्न सक्ने अवस्था थिएन ।
त्यसरी भित्रि जालझेल, कूटनीतिमा त ओलीजी पहिलेदेखि नै सिपालु हो । त्यो निरन्तर हुँदै आउँदा ठूलो खेमा विपक्षमा गयो । यतापट्टि माधवजीको कारवाही गरेका कुरा पुरानो हुँदै आयो ।
गणतन्त्र आएपछि ओलीजीले घरमा नै आएर हिजोका कार्यकर्ता सहयोद्धा साथीहरु । मेरो नेता तिमी । तिमी पार्टीबाहिर म पार्टीको अध्यक्ष भएर बस्न मिल्यो ? भन्दै स्थायी कमिटीमा ल्याउछु भने ल्याएनन् । उनले चाकडी नै गर्ने हो । पछि मैले छोडदिएँ । निष्क्रिय हुँदै गइयो ।
पार्टी एकता हुँदा त मेरो नामै पनि राखेनन् । नाम नराखेपछि खोज्दै पनि म गइनँ । अहिलेको स्थिति के हो भने नेकपा एमाले ब्यूँतिदा त एमालेको केन्द्रीय सदस्य नै हो । नेकपा एमाले पूर्ववत रुपमा त फर्कियो नि । पार्टी एकता हुँदाको एमाले सम्झने हो भने म पार्टीकोे सदस्य हो । तर म त्यो भनेर दाबी गर्न पनि गएको छैन ।
किनभने बीचमा तीनवर्ष हराएर हजुर म पनि थिएँ नि भन्दै जान मलाई रहर पनि छैन । राम्रा काम गरेर, दुनियाँको हितमा काम गरेर गएको भए सायद रहर पनि लाग्थ्यो कि ? झारपातको रुपमा उहाँहरु अघि उभिनुभएको छ । अलिअलि छिटा त माधवजीहरुलाई पनि लागेको छ । धेरै छिटा त ओलीजीले नै बोक्नुभएको छ । हुँदाहुँदै विधान, कानुन संविधान केही पनि लागेन । ओलीजीले जे चाह्यो त्यहि हुने भएको छ । यस्तो स्थितिमा त्यता गएर सल्लाह दिएर पनि केही हुँदैन ।
यहाँ उहाँहरुको के सुर रहेछ भन्दा राम्रो चेतना के लाग्यो भने । देशमा विधि विधानको विरुद्धमा उठ्ने कार्यकर्ताको केही जमात रहेछ । हिजो मनपरीतन्त्र गरेर जाँदा कसैले पनि बोल्दैनथ्यो ।
अध्यक्षले भनेपछि हाइहाइ भएर जान्थे भने अहिले त्योभन्दा फरक स्थिति छ ।
झलनाथजीको मात्रै होइन । कार्यकर्ताहरुको र्‍याङ्क एण्ड फाइल छ । ७–८ सय कार्यकर्ता आएका छन् । त्यसमा हामी झुक्किएर आयौं भन्ने कार्यकर्ता कोही पनि छैनन् ।
ओलीसँग बस्नै हुँदैन भन्ने छन् । ठूलो संख्या चाहिँ सच्याए भने फेरि एकाकार हुन सकिन्छ । पार्टी एकजुट भएर गयो भनेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने मनशायका अत्यधिक मान्छे पाएँ । त्यो पनि मेरो लागि फाइदा कै कुरा । नयाँ चेतना आएछ भन्ने लाग्यो ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनको पहिलो पुस्ताको नेता हुनुहुन्छ तपाईं । तपाईंहरुले नै सुरुवात गर्नुभएको आन्दोलनले विशाल रुप लियो र नेकपा बन्यो । झन्डै दुई तिहाई मत ल्याउने परिस्थिति पनि बन्यो । अहिले त्यो भत्काउँदै भत्काउँदै गएर फेरि शुन्यमा पुग्ने स्थिति बनेको छ । त्यसमा मुख्य केपी ओलीकै प्रवृत्ति दोषी हो कि ?
यो स्थितिको जिम्मेवार त एक नम्बरमा ओलीजी नै हो । सेकेन्ड, थर्ड पोजिसनमा माधव, झलनाथ, प्रचण्डको पनि भूमिका आफ्नो ठाउँमा होला ।
अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले निहुँ खोजीखोजी भत्काउने काम त ओलीजी ले नै गर्नुभयो ।
उहाँले जति ठूला गफ गरे पनि संविधानको प्रतिकुल उहाँले संसद् भंग गर्नुभयो । पार्लामेन्टले उहाँको काम कुरोमा विरोध गरेकै थिएन जस्तो,ओलीको अभिन्न नेताको रुपमा सुवास नेम्वाङ पनि हुनुहुन्छ ।
राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा उठेका विचार, बहस हेर्दा पार्टी नै एक रहँदैन भन्ने एक खालको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ , यस्तो अवस्थामा तपाईं कताको पक्षमा उभिनुभयो ?
दुईवटा कुरा छन् । यो भेला पार्टी विभाजनका लागि हो भन्ने टुंगोमा म पुगेको छैन । कार्यकर्ताको मनस्थिति हेर्दा ओलीले २८ गतेको निर्णय फिर्ता गरे नेकपा एमाले अहिले पनि एकजुट हुन्छ ।
एकीकृत एमाले बन्नका लागि मुख्य बाधक चाहिँ के हो ?
ओलीको मिचाहा प्रवृत्ति नै मुख्य बाधक देखिएको छ । ओलीले २८ गतेको निर्णय फिर्ता लिएर आउनुस् एकै ठाउँमा बसेर छलफल गरौं भने त इस्यु नै छैन । माधवजीले भनेजस्तै विधि पद्धति र मुख्य समस्या हो ।
तपाईं फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्किनुहुन्छ ?
मैले केही टुंगो गरेको छैन । स्थितिले माग्यो भने । सक्रिय राजनीतिमा फर्किन नसक्ने पनि होइन । त्यो वातावरण बनिसकेको पनि छैन । त्यसकारण सक्रिय राजनीतिमा आउँदिन भनेर घोषणा गरेको पनि छैन । सक्रिय राजनीतिमा आएँ भनेर टुंगोमा पुगेको पनि छैन ।
स्थिति हेर्दैछु एकातिर वातावरण बन्दैछ भने अर्कोतिर संकटमा जाँदै छ । संकटकै बेलामा म एउटा गुटमा लागेर अर्थात् ओली वा माधवको गुटमा लागेर सक्रिय हुने मानसिकतामा छैन ।